NY BAIBOLY MOMBA NY FIVORIANA | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Andinin-tsoratra ao amin'ny Baiboly NY BAIBOLY dia manonta momba ny zavamananaina
NY BAIBOLY dia manonta momba ny zavamananaina
Ny Pasitera Ikechukwu Chinedum
Androany isika dia handray anjara amin'ny andininy momba ny fisaraham-panambadiana. Ny fanambadiana dia andrim-pianakaviana izay natsangan'Andriamanitra tenany. Izany no antony mahatonga ny lehilahy masina handao ny tranon-drainy sy ny reniny mba ho vatana iray miaraka amin'ny vadiny, ny anton'ny soratra masina? Andriamanitra dia nanorina ny fanambadiana mba hiantohana ny fitohizan'ny olombelona eto an-tany; izany no nilazan'Andriamanitra hoe mihabetsaha ary mamenoa ny tany. Na izany aza, misy zavatra manimba indraindray ny firaisana izay notahina; antsoina hoe fisaraham-panambadiana.
Hanao famandrihana tsara amin'ny fantsona YouTube izahay mba hijerena ireo horonantsary mivavaka isan'andro
Fisaraham-panambadiana dia toe-javatra iray izay manapa-kevitra ny mpivady hamaha ny fanambadian'izy ireo ary handeha amin'ny fomba hafa. Betsaka ny olona nilaza fa ny fisaraham-panambadiana dia manohitra ny ampahany araka ny soratra masina izay milaza fa ny zavatra niraisan'Andriamanitra dia aza avela hisy hisaraka. Trano tsindraindray no rava noho ny fisaraham-panambadiana.
Ny fanambadiana izay indray mandeha no lohahevitry ny tanàna noho ny habetsahan'ny fandaniam-bolan'ireo mpivady nanary azy io volana vitsivitsy taty aoriana. Inona marina no anton'ireny fiara fisaraham-panambadiana ireny henontsika. Ny mampihomehy dia ny pastera sy ny lehilahy ary ny vadin'andriamanitra aza dia misaraka koa, mahatalanjona. Andao hojerentsika izay lazain'ny Baiboly momba ny fisaraham-panambadiana mba hanomezana antsika sary mazava kokoa ny dikan'izany.
Andinin-teny ao amin'ny Baiboly
Marka 10: 2-12 Ary ny Fariseo nanatona an'i Jesosy ka nanontany azy hoe: Mety va ny lehilahy manala ny vadiny? naka fanahy azy izy.Dia namaly izy ka nanao taminy hoe: Ahoana no nandidian'i Mosesy anao? Dia hoy ireo: Mosesy dia namela taratasy fisaraham-panambadiana ary hialana. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: Ny hamafin'ny fonao. Izy no nanoratra izao anao izao.Tamin'ny fiandohan'ny famoronana dia nataon'Andriamanitra ho lahy sy vavy izy. Izany no mahatonga ny lehilahy handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny; ary dia ho nofo iray ihany izy roa. tsy misy roa intsony, fa iray ihany.Koa izany no niraisan'Andriamanitra dia aoka tsy hisy hampisaraka. Ary tao an-trano dia nanontany azy indray ny mpianany ny amin'izany zavatra izany ihany. Ary hoy Jesosy taminy: Na zovy na zovy no manary ny vadiny ka manambady olon-kafa, dia mijangajanga aminy izy. Ary raha misy vehivavy manary ny vadiny ka manambady olon-kafa, dia mijangajanga izy.
Jeremia 3: 8
Ary hitako fa, noho ny antony rehetra nijangajangan'ny Isiraely nanalavitra azy dia nomeko taratasy fisaraham-panambadiana; kanefa ny Joda, mpivadika mpivadika dia tsy natahotra, fa nandeha tamin'ny fijangajangana ihany koa.
Matio 5: 31
Voalaza fa, na zovy na zovy no manary ny vadiny, dia aoka izy hanome azy fisaraham-panambadiana.
Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Na zovy na zovy no misaotra ny vadiny, afa-tsy noho ny fijangajangana, dia mampijangajanga; ary na zovy na zovy no hanambady izay efa nisaraka, dia mijangajanga.
Matio 19: 7
Hoy izy taminy: Nahoana ary Mosesy no nandidy hanome taratasy fisaraham-panambadiana sy hanome vahana azy?
Deoteronomia 21: 10-14 Ary raha mandeha hiady amin'ny fahavalonao ianao, dia natolotr'i Jehovah Andriamanitrao eo an-tananao ireo, ary nentinao ho babo izy,
Ary nahita vehivavy tsara tarehy izy, ary nitady azy ianao mba hanananao azy amin'ny vadinao;
Dia ento mody any an-tranonao izy; ary hanaratra ny lohany izy ary hanakombana ny hohony;
Dia hametraka ny fitafiany ny fahababoana izy ka hitoetra ao an-tranonao ka hitomany ny rainy sy ny reniny iray volana: ary rehefa afaka izany, dia hiditra ao aminy ianao ary ho vadiny, ary izy ho vadiny ny vadinao.
Ary raha tsy ankasitrahanao izy, dia avelao handeha amin'izay tiany izy; fa tsy hamidy vola aminy ianao, ary aza amidy aminy, fa efa nampietry azy izy.
Matio 19: 3-9 Ary ny Fariseo koa nanatona azy, naka fanahy azy ka nanao taminy hoe: Mety va ny lehilahy ny manary ny vadiny amin'ny antony rehetra?
Ary Izy namaly ka nanao taminy hoe: Tsy mbola novakinareo va fa ilay nanao azy tany am-boalohany no nanao azy ho lahy sy vavy,
Ary hoy izy: Noho izany dia handao ny rainy sy ny reny ny lehilahy ka hifikitra amin'ny vadiny; ary dia ho nofo iray ihany izy roroa.
Ka dia tsy roa intsony izy, fa nofo iray ihany. Ary noho izany, izay nampiraisin'Andriamanitra dia aza avela hampisaraka ny olona izy.
Dia hoy Izy taminy: Ny hamafin'ny fonareo no namelan'ny olona hialana amin'ny vadinareo; fa hatrany am-piandohana dia tsy mba toy izany.
Ary lazaiko aminareo: Na zovy na zovy no misaotra ny vadiny, afa-tsy noho ny fijangajangana ihany, ka mampakatra olon-kafa, dia mijangajanga; ary na zovy na zovy no manambady vehivavy efa misaraka dia mijangajanga.
Romana 7: 2-3 Fa ny vehivavy izay manam-bady dia voafatotry ny lalàna amin'ny vadiny raha mbola velona izy; fa raha maty ny lahy, afaka amin'ny lalàn'ny vadiny izy.
Ary raha mbola velona ny lahy ka manambady olon-kafa, dia hatao hoe mpanitsakitsa-bady izy; fa raha maty kosa ny lahy, dia afaka amin'ny lalàna izy; ka dia tsy mijangajanga izy na dia manambady olon-kafa aza.
1 Kôrintianina 7: 10-17 Ary ny manambady dia baikoiko, nefa tsy izaho, fa ny Tompo: Aoka ny vehivavy tsy hiala amin'ny vadiny;
Fa raha miala izy, dia aoka hitoetra tsy manam-bady, na aoka hody amin'ny lahy; ary aoka ny lahy tsy hiala amin'ny vadiny.
Fa amin'ny sisa kosa dia lazaiko, fa tsy ny Tompo: Raha misy rahalahy manambady tsy mino, ka faly mitoetra ao aminy, dia aoka tsy hiala.
Ary ny vehivavy izay tsy manam-bady tsy mino, ary raha tiany ny hiara-mitoetra aminy, dia aza avela hody izy.
Fa ny lahy tsy mino dia hamasinin'ny vady, ary ny lahy manamasina ny vady tsy mino; fa raha izany, ny zanakao dia naloto; nefa dia masina ireo.
Fa raha ny tsy mino dia hiala, avelao izy hiala. Ny anadahy na rahavavy iray dia tsy eo ambanin'ny fanandevozana toy izany: fa Andriamanitra efa niantso antsika hihavana.
Fa ahoana no ahafantaranao, ravehivavy, na hovonjenao ny vadinao? Ary ahoana no ahalalanao, ry lehilahy, na hamonjy ny vadinao ianao?
Fa toy ny nizaran'Andriamanitra ny olona rehetra, araka ny niantsoan'ny Tompo azy rehetra, dia aoka izy handeha. Ary toy izany no anendreko ny fiangonana rehetra.
Previous lahatsoratraAndinin-teny momba ny fahaiza-mitarika
Next lahatsoratraNY BAIBOLY IZAO DIA MOMBA NY FIKAMBANANA
Ny anarako dia Pasitera Ikechukwu Chinedum, izaho dia lehilahin'Andriamanitra, izay fatra-pitia ny hetsik'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Mino aho fa nomen'Andriamanitra hery sy fahasoavana hafahafa ny mpino tsirairay hanehoana ny herin'ny Fanahy Masina. Mino aho fa tsy tokony hisy Kristiana henjehin'ny devoly, manana ny fahefana hiaina sy handeha amin'ny fanapahana amin'ny alàlan'ny vavaka sy ny teny isika. Raha mila fanazavana fanampiny na torohevitra, azonao atao ny mifandray amiko ao amin'ny chinedumadmob@gmail.com na Miresaka amiko amin'ny WhatsApp And Telegram amin'ny +2347032533703. Izaho koa dia tiako ny manasa anao hanatevin-daharana ny vondrona vavaka 24 ora mahery ao amin'ny Telegram. Tsindrio ity rohy ity raha te hiditra Ankehitriny, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Hotahian'andriamanitra anie ianao.
Andinin-tsoratra masina 10 vakiana ho an'ny herim-po rehefa matahotra
Andininy Baiboly 30 ho fiarovana
Andinin-Baiboly 10 mahery ho an'ny tanjaka sy vavaka
SALAMO 21 midika hoe andininy isaky ny andiany
Famakiana Baiboly isan'andro ho an'ny 4 Novambra 2018.
30 Ireo laharam-bavaka mahomby
Desambra 19, 2018
FIVAVAKANA HO AN'NY BATSWANA
Septambra 14, 2019